Isi na ukpuru okpomoku, gini bu okpukpo oku okpomoku
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-ewere ọnọdụ na ihe na-eduzi ihe (ọ bụchaghị ígwè magnet) mgbe a na-etinye ihe ahụ n'ọhịa dị iche iche. Mkpọ oku na-ekpo ọkụ bụ n'ihi hysteresis na losses ugbu a na-efu.
Hysteresis na-efu naanị na ihe ndị magnetik dịka nchara, nickel, na ndị ọzọ pere mpe. Hysteresis ọnwụ na-ekwu na nke a na-akpata esemokwu n'etiti ụmụ irighiri ihe mgbe magnetized ihe ahụ n'otu ụzọ, na nke ọzọ. Enwere ike iwere mkpụrụ ndụ ndị ahụ dị ka obere nju nke na-atụgharị na ntụgharị ihu ọ bụla nke mpaghara ndọta. A choro oru (ike) iji gbanwee ha. Ike na-agbanwe n'ime okpomọkụ. Ọnụego mmefu nke ume (ike) na-abawanye site na mmụba ụba nke mgbanwe (ugboro ole).
Eddy ugbu a na-efunahụ ihe ọ bụla na-eduzi ihe na mpaghara ndọta dịgasị iche. Nke a na - ebute isi, ọbụlagodi na akụrụngwa enweghị nke ọ bụla nwere ihe magnetik na - ejikọtakarị ya na igwe na igwe. Ihe atụ bụ ọla kọpa, ọla, aluminom, zirconium, nonmagnetic steel nchara, na uranium. Eddy na-ebili mmiri bụ mmiri eletrik na-ebute site na ọrụ ntụgharị na ihe. Dị ka aha ha na-egosi, ha na-apụta na-agagharị na swirls na eddies n'ime ihe siri ike. Eddy ugbu a dị ezigbo mkpa karịa hysteresis na ntinye ọkụ. Rịba ama na a na-etinye kpo oku n'ime ihe ndị na-abụghị nke na-arụ ọrụ, ebe ọnweghị ọnya hysteresis.
Maka kpo oku nke nchara maka ime ka ike, ịkpụ, agbaze, ma ọ bụ nzube ọ bụla nke chọrọ okpomọkụ karịa Curie okpomọkụ, anyị apụghị ịdabere na hysteresis. Akụrụ na-efunahụ ihe ndị magnet ya dị elu karịa okpomọkụ a. Mgbe ígwè dị ọkụ n'okpuru ebe Curie, onyinye nke hysteresis na-adịkarị obere nke na enwere ike ileghara ya anya. Maka nzube niile ọ bụla, m2R nke agba mmiri ediri bụ naanị ụzọ nke ike ọkụ eletrik nwere ike isi ghọọ okpomọkụ maka ịmepụta ihe ọkụ ọkụ.
Ihe abụọ dị mkpa maka ịmepụta ọkụ na-eme:
A na-agbanwe usoro magnet
Ihe na-eduzi ihe na-emepụta ihe ọkụkụ na-etinye n'ime oghere magnet
isi nke induction kpo oku